Mpaghara obodo dị nso 90km n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Prague bụ obodo: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice na Jičín. A na-atụle Turnov na "obi nke Paradaịs Bohemian". Isi obodo akara nke mpaghara ahụ bụ ugwu Kozákov na mkpọmkpọ ebe nke Trosky. Obodo Rock dịkwa mkpa, ọkachasị Prachovské skály, Příhrazské skály, Hruboskalsko na ọdọ mmiri, dị ka Žabakor, Komárovský rybník na ọdọ mmiri na ndagwurugwu Podtrosecké na Podkostecké.
A na-ekekarị Bohemian Paradise n'ọtụtụ mpaghara:
N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Turnov
mpaghara dị na Kozákov
Ndịda ọdịda anyanwụ ruo ndịda ọwụwa anyanwụ nke Turnov
mpaghara dị na Trosek
Tags: Czech Paradise
Ọnọdụ: A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov, Czech Republic
Ederede ederede sitere na blọọgụ a
Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser n'asụsụ German) bụ obodo na ebe mgbago ugwu ọdịda anyanwụ Giant Mountains. Ọ dị na mpaghara Liberec, na mpaghara Semily, na ndagwurugwu mmiri iyi Huťský dị n'etiti oke ugwu Stráž (782 m), Čertova hora (1022 m) na Lysá hora (1344 m) na n'akụkụ aka ekpe (ọwụwa anyanwụ) nke Osimiri Jizera. Ihe dị ka puku mmadụ abụọ na narị isii bi na ya.
Ugwu ukwu, Ugwu Jizera, Paradaịs Bohemian
Ezigbo ndị ọbịa nke sava PetrPikora.com, peeji ndị ewepụtara maka Ugwu Giant, ugwu Jizera na Bohemian Paradise nwere ike ịchọta ugbu a na ngalaba Czech ọhụrụ PetrPikora.cz, daalụ. Ruo obere oge, akwụkwọ ochie ga-adị na ngalaba abụọ n'otu oge.
Koodu usoro egwu di nfe
Ihe mmemme Python a dị mfe na-arịọ onye ọrụ ka ịhọrọ arụmọrụ achọrọ. Nhọrọ nke 1, 2, 3 na 4 dabara adaba. Abụọ ma ọ bụrụ na… elif… ahọrọ nọmba ndị ọzọ ma ejiri ya mee ihe iji mepụta otu akụkụ nke mmemme ahụ. Nkọwapụta onye ọrụ kọwara (), wepu (), mụbaa (), ma kesaa () arụ ọrụ dị mma.
# Ọrụ a na - agbakwunye ọnụọgụ abụọ def add (x, y): nlọghachi x + y # Ọrụ a na --ebelata ọnụọgụ abụọ nke mbelata ngbanwe (x, y): nloghachi x - y # Ọrụ a na - amụba ọnụọgụ nọmba ugboro abụọ ( x, y): laghachi x * y # Ọrụ a na-ekewa nọmba (nọmba) nọmba (x, y): nlọghachi x / y deputa ("Họrọ ime.") bido ("1.Add") deputa ("2.Subtract") deputa ("3.Multiply") deputa ("4.Divide")